Congrees-ka Mareykanka ayaa meel mariyey sharci soo afjaraya xayiraadda muwaadiniinta… – Hagaag.com
Congrees-ka Mareykanka ayaa meel mariyey sharci soo afjaraya xayiraadda muwaadiniinta…
Posted on 23 Luulyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Arbacadii shalay ayaa Aqalka Wakiilada ee Mareykanka meel mariyey sharci soo afjaraya xayiraadda muwaadiniinta 7 dal oo badankood ay yihiin Muslimiin soo galaya Mareykanka, kaasoo dhaqan geliyey Madaxweyne Donald Trump laba sano ka hor.
Hindise-sharciyeedkan ay taageerayaan xisbiga Dimoqraadiga ee Aqalka Wakiilada ayaa yimid xilli cod loo qaadayey Golaha Guud, waxaa 233 wakiil ay u codeeyeen in la baabi’iyey ama la joojiyay go’aankii Trump, taa bedelkeed waxaa diiday 183 wakiil.
Hindise-sharciyeedkan oo ay hogaaminayso Reps. Judy Chow, waxaa ku jira luqad loogu talagalay in lagu xakameeyo awoodda madaxweynaha ee lagu soo rogo xannibaadaha soo gelitaanka muwaadiniinta ka imanaya waddamada kale iyo in laga mamnuuco takoorka diimeed ee go’aannada la xiriira soo-galootiga.
Taageerayaasha sharcigu waxay ku adkaysanayaan inay tahay tallaabo lagama maarmaan ah in lagu celiyo siyaasadaha ay u arkaan midabtakoor, cunsurinimo iyo mid aan dastuuri ahayn.
Sharciga ayaa sheegaya in Aqalka Cad iyo waaxda arrimaha gudaha iyo amniga gudaha ay khasab ku tahay inay kala tashadaan Congress-ka kahor inta aysan soo rogin xannibaadaha safarka ee Mareykanka, haddii kale go’aan kasta oo la qaato isaga oo aan loo meel dayin uu noqonayo mid aan ansax ahayn.
Sida Xeerka ku cad dadka ay saameeyeen xayiraada safarka ee maamulka Mareykanka waxay xaq u leeyihiin inay dacwad ka furan karaan maxkamadaha federaalka.
Haddii ay ansixiyaan golaha Guurtida ee Senate-ka, waxaa loo gudbin doonaa Madaxweyne Trump si loo ansixiyo, si uu u noqdo sharci.
Sida ku xusan xayiraadda uu saxiixay Trump laba sano ka hor, waxay ka xirtay xuduudaha Mareykanka muwaadiniin ka kooban 7 dal, kuwaas oo badankood ay yihiin Muslimiin.
Go’aanka ayaa ka mamnuucaya muwaadiniinta ka soo jeeda dalalka Libya, Iran, Somalia, Syria, Yemen, Kuuriyada Woqooyi, iyo Venezuela inay soo galaan Mareykanka si kastaba, ha ahaato dhanka hawada, badda, ama xuduudaha dhulka.